Daraasad:Cabbitaanka gaaska leh waxa uu soo dedejiyaa gabowga maskaxda iyo waalida - Horn Future
Daraasad:Cabbitaanka gaaska leh waxa uu soo dedejiyaa gabowga maskaxda iyo waalida
Daraasad cusub oo Mareykanka ah ayaa daaha ka fayday in cabitaanka 1 qaruurad/dasaad ugu yaraan maalintii ee ah cabitaannada gaaska leh oo xataa ay ku jiraan kuwa uu hooseeyo-(calories) kooga, ama wax loo yaqaano “diet”ka ay dedejiyaan gabowga maskaxda iyo inay kor u qaadaan halista cudurka ( stroke)ga ee ah xanuunka kadisk ah ee ku dhaca maskaxda ee naafeeya jidhka iyo cudurka(dementia) ee waalida.
Daraasaddan oo ay sameeyeen cilmi baadhayaal katirsan kulliyadda caafimaadka ee Jaamacada Boston,ayaa xaqiijisay in cabbitaanka ugu yaraan 1 kamid ah qaruurad/daasad maalintii oo ah cabitaannada gaaska leh ee macaan ama kuwa loo yaqaano“diet”ka, ay si weyn u kordhiyaan halista cudurka( stroke)ga ee ah xanuunka kadiska ah ee maskaxda ku dhaca ee naafeeya jidhka iyo cudurka (dementia) ee sababa waalida in ka badan saddex goor, marka la barbar dadka cabba toddobaadkii hal mar cabbitaankan.
Waxa daraasaddan ay ka digtay sonkorta dheeraadka ah ee jidhka bini’aadamka, gaar ahaan tan loo yaqaano( fructose) ee ku jirta cabitaannada fudud inay waxyeelayn karto maskaxda.
Waxa cilmi-baadhayaalkani ay carabka ku adkeeyeen cabbitaanka 2 koob oo kamid ah cabitaankan fudud maalintii ay dhici karto inay labo-laabto halista cudurka macaanka nuuca 2aad, xataa haddii uu yahay cabbitaankani nuuca loo yaqaanp “diet”ka,.
Daraasaddo hore ayaa waxa ay muujiyeen cabbitaanka joogtada ah ee ah cabitaannada fudud ee sonkorta leh inay keeni karaan dhaawac haleela unugyada difaaca jidhka ee ka hortagga gabowga degdega ah, taasoo ka dhigaysa jidhka mid u nugul cudurada raaga hab la mid ah saamaynta sigaarku uu leeyahay oo kale.
« Qaramada Midoobay:Waxa ku dhinta ilmo yar 10kii daqiiqa ba Yemen sababaha macaluusha	» Waaxda sirdoonka Sudan oo ku eedeeysay koonfurta Sudan inay taageerto macaaradka hubaysan